general & monthly
to buy temple
Generalတရားစာအုပ်များSites(1)ကိုမာဃဓမ္မစာအုပ်စင်(2)လယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာများ(3)စကားဝါမြေစာအုပ်စင်(4)BurmaBorn စာအုပ်စင်(5)ဓမ္မဟေ၀န်စာအုပ်စင်(6)ဓမ္မရံသီစာအုပ်စင်(7)မဟာဓမ္မိကဝိဟာရစာအုပ်စင်(8)အရှင်ကုမာရစာအုပ်စင်(9)အလှတရား စာအုပ်များ
03:21 mahamuni No comments
The (7) Days Meditation Retreat will be held at Changi Aloha Fairy Point Chalet4by Myauk Oo Sayadaw Ashin Wayaminda from 13 September 2011 to 19 September 2011. Due to limited accommodation, Full Time "Yogi" registration has been closed. However you and your family are warmly invited to join as "Day Yogi" / Listening Sayadaw's Dhamma Talks. Time Table is enclosed for your information.
Sayadaw U Thupiya & Mahamuni Buddhist Society
Days: 13/Sep/2011 to 19/Sep/2011
Place: Aloha Changi
Fairy Point Chatet (4) Map
လမ်းညွှန်: Tampines MRT မှ Bus No. 29 ကိုစီး၊ Old Pier Road မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီး၊ Cran Well Road လမ်းအတိုင်းဆက်သွားကာ၊ Cetterick Road သို့ဝင်ပါ၊ Fairy Point Chalet (4) ကိုတွှေ့ပါလိမ့်မည်။
မြောက်ဦးဆရာတော်၏ (၇) ရက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း
နံနက် ၃း၃၀ နာရီ
နံနက် ၄း၀၀ မှ ၅း၀၀ ထိ
နံနက် ၅း၀၀ မှ ၆း၀၀ ထိ
အရုမ်ဏ်ဆွမ်းစားရန် + စင်္ကြန်
နံနက် ၆း၀၀ မှ ၇း၀၀ ထိ
နံနက် ၇း၀၀ မှ ၇း၃၀ ထိ
နံနက် ၇း၃၀ မှ ၈း၃၀ ထိ
နံနက် ၈း၃၀ မှ ၉း၃၀ ထိ
နံနက် ၉း၃၀ မှ ၁၀း၃၀ ထိ
နံနက် ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၃၀ ထိ
နေ့ဆွမ်းစား + အနားယူ
နေ့လည် ၁၂း၃၀မှ ၁း၃၀ ထိ
နေ့လည် ၁း၃၀မှ ၂း၀၀ ထိ
နေ့လည် ၂း၀၀မှ ၃း၀၀ ထိ
နေ့လည် ၃း၃၀မှ ၃း၃၀ ထိ
နေ့လည် ၃း၃၀မှ ၄း၃၀ ထိ
ညနေ ၄း၃၀မှ ၅း၀၀ ထိ
ညနေ ၅း၀၀မှ ၆း၀၀ ထိ
ညနေ ၆း၀၀မှ ၆း၃၀ ထိ
ညနေ ၆း၃၀မှ ၇း၃၀ ထိ
ညနေ ၇း၃၀မှ ၈း၀၀ ထိ
ညနေ ၈း၀၀မှ ၉း၀၀ ထိ
တရားနာ၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေ
05:48 mahamuni No comments
We welcome you and your family to pay attention to the Dhamma that Sayadaw Dr. U Thupiya, presiding monk of Buddhagarasukharama Temple & Mahamuni Buddhist Society, will talk Dhamma leading to the Nibbana in coming Sunday (11/09/2011) at Mangala Vihara Buddhist Temple of Singapore.
Mahamuni Buddhist Society, ဗုဒ္ဓဂယာသုခါရာမကျောင်းဆရာတော်
M.A, Ph.D (Doctor of Philosophy)
Day: 11. 09. 2010
Place: မင်္ဂလဝိဟာရ Mangala Vihara Buddhist Temple
30 Jalan Eunos Singapore 419495 Map
08:15 mahamuni No comments
You and your family are cordially invited to participate two days Day Meditation Retreat, conducted by DHAMMADUTA DR. ASHIN PANNYISSARA. It will be held on 30-08-2011 & 31-08-2011 (Tuesday and Wednesday), 1.30 pm to 5.30 pm daily at Yunan Ballroom, Fairway Club, No.11 Japanese Garden Road Singapore 619229. Fairway Club situates at the corner of Japanese Garden Road and Yuan Chin Road.
We like to take opportunity to express our appreciation for your endless strong engagement and look forward for continuous supports.
[ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ၊ သာသနဇောတိပါလ ဓမ္မာစရိယ၊ သာသနဟိတဂဏ၀ါစက ဓမ္မာစရိယ၊ B.A, M.A, Ph.D)]
Day: 30/08/2011 (Tuesday and Wednesday)
Place: Yunan Ball Room, Fairway Club,
No.11, Japanese Garden Rd
Singapore 619229 Map
[You can take Bus No. 154 from Boon Lay Interchange or bus stop at opposite Lake Side MRT and alight at 3rd bus stop (bus stop No. B21639) on Yuan Chin Road. Then walk forward short distance to Fairway Club.]
တနေ့တာအတွက်- သောက်ရေသန့် $ 100 ။ အအေး $ 100 ၊ တရားဟော ခန်းမ အတွက် တနာရီလျှင် $ 250 ဖြင့် ကုသိုလ်ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
တရားစခန်းအတွက် ယာယီကျောင်းဆောင်၊ အာဟာရဒါန၊ သောက်ရေသန့်၊ အအေး၊ လှူဒါန်းလိုသူများ အကျိုးဆောင် ဒေါ်ဌေးဌေးမွန် (၉၂၇၂၂၃၅၀) သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
MBS ၏ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
Copyright © 2011 mahamuni buddhist society | Powered by Sayadaw Dr. U Thupiya
Design by setgyarwalar.ven@gmail.com | Bloggerized by Lasantha - mahamuni.sg@gmail.com | mahamuni.buddhist